Wararka - Dayactirka iyo dayactirka caaryada tuubbada
Marka la barbardhigo wasakhaha kale, tuubbada ku dhejisa waxay haysaa qaab dhismeed sax ah oo aad u adag, waxaanan leenahay shuruudo sare oo loogu talagalay dayactirkeeda iyo dayactirkeeda. Sidaa darteed, habka wax soo saarka ee wasakhahaasi biibiile, dayactirka iyo dayactirka saxda ah waxay ku habboon yihiin hagaajinta wax soo saarka wax soo saarka iyo ilaalinta waxsoosaarka xasiloon ee wax soo saarka.
Maanta, waxaan idinla wadaagi doonaa xoogaa waayo-aragnimo ah oo farsamayaqaanadeena ah oo ku saabsan ilaalinta caaryada.
1. Ka dib marka caaryada lagu rakibo mashiinka wax lagu duro ee duritaanka, ka hor mari caaryada madhan. La soco haddii dhaqdhaqaaqa qayb kastaaba dabacsan yahay, haddii ay jirto wax aan caadi ahayn, haddii istaroogga soo bixida iyo istaroogga furitaanka ay meesha ku jiraan, haddii dusha kala bixintu ay si aad ah isugu dheellitiran tahay inta la isku xirayo caaryada, iyo in saxanka saxanka cadaadiska la adkeeyay.
2. Marka caaryada la isticmaalayo, hayso heerkulka caadiga ah kuna shaqee heerkulka caadiga ah si loo kordhiyo nolosha adeegga caaryada.
3. Qaybaha mashiinka caadiga ah ee caaryada waa in si joogto ah loo hubiyaa, saliida saliidda ahna waa in la mariyaa markay habboon tahay, sida timo-jeexa, booska safka, boostada hagaha, shaadhka hagaha. Gaar ahaan marka heerkulku sarreeyo xagaaga, saliidda waa in lagu daraa ugu yaraan laba jeer si qaybahaasi ay ugu shaqeeyaan si dabacsan.
4. Ka dib markii caaryada la isticmaalo, saabka iyo xudunta waa in la nadiifiyaa, oo qashinna looma tagi karo, si aysan u dhaawicin dusha sare ee caaryada oo lagu buufiyo wakiilka anti-miridhku.
5. Waa inaanay jirin biyo qaboojin oo hadhay habka qaboojinta caaryada, waana in la nadiifiyaa si looga hortago in caaryuhu daxalaystaan ​​oo ay xidhaan marin biyoodka, si loo kordhiyo nolosha marin biyoodka qaboojinta.
6. Nadiifi dusha sare ee godka si joogto ah. Markaad xoqayso, isticmaal aalkolo ama ketone u diyaarso ka dibna ku qalaji waqtiga si aad uga hortagto isku-darka meerkulka hooseeya ee la soo saaray inta lagu gudajiro habka wax-u-qaadista cirbadeynta ee ka-soo-goynta godka caaryada
7. Marka caaryadu shaqeyneyso, si taxaddar leh u hubi xaaladda hawlgalka ee qayb kasta oo koontarool ah si looga hortago cilladaha iyo kuleylka nidaamka kaabayaasha.
8. Kadib marka caaryadu socoto, ku mari mariidka miridhkiisa godka caaryada si aad uga fogaato miridhku. Rinjiga banaanka saldhiga caaryada si looga fogaado miridhku.
9. Caaryada waa in si adag loo xiraa inta lagu jiro keydinta si looga ilaaliyo in boodhku soo galo godka oo sababa in caaryuhu daxalaystaan
Ugu dambeyntii, taxaddarrada dayactirka caaryada:
1. Qaybaha caaryada waa in la subkay inta lagu jiro dayactirka maalin kasta
2. Dusha sare ee caaryada waa in la nadiifiyaa, ha ku dhejin sumadaha dusha sare ee caaryada
3. Haddii cilladaha aan caadiga ahayn laga helo caaryada inta lagu jiro howsha wax soo saar, sida soo bixid aan caadi ahayn ama furitaan aan caadi ahayn iyo dhawaqa xirida, isla markiiba jooji mashiinka si loo baaro loona dayactiro waqtiga. Qalliinno kale ha sameyn.